Dai 2, 2021 alinks Jerimani, mabasa
Kuti uwane basa kuGerman, munhu wese anoda kutanga atsvaga basa kuGerman. Unogona kutsvaga basa kubva chero kupi, ungave uchigara kuGerman kana kunze kwenyika. Zvichienderana nenyika yako, unogona zvakare kuuya kuGerman
Dai 1, 2021 alinks mabasa, Kwata
Wese munhu anoda kuwana basa muQatar anoda kutanga awana basa kuQatar. Uye ipapo vanogona kuwana mvumo yekugara kana vachida imwe. Izvi zvese zvinogona kuitwa kubva kunze kwenyika kana muQatar. Of
Ungawana sei vhiza kuMexico kune maItaly? Nhungamiro ipfupi
April 21, 2021 alinks Mataliyana, Mekisiko, vhiza
Iwe wafunga kushanyira imwe yeakanakisa nyika mupasi, Mexico! Iwe unenge wakazvibvunza zvakanaka kuti ndeapi magwaro auchazoda: sezvazvinowanzoitika, kune nyika dziri kunze kweEuropean Union, chitupa hachisi
April 18, 2021 alinks Chinese, Teki, vhiza
April 14, 2021 alinks qataris, Teki, vhiza
Iwe haudi visa yevashanyi yekugara pfupi muTurkey semugari weQatar. Iwe unogona nyore kuenda kuTurkey, kwekushanya, kana bhizinesi, kwenguva yakazara yemazuva zana nemakumi masere, asi haugone kugara mukati
Visa yeTurkey kubva kuOman: kapfupi gwara
April 13, 2021 alinks Omanis, Teki, vhiza
April 13, 2021 alinks Emiratis, Teki, vhiza
Unogona kuwana vhiza yeTurkey pamhepo pa e-Visa Republic yeTurkey. Vagari veUAE vanogona kuwana vhiza yekugara pfupi muTurkey, yekushanya, kana yebhizinesi. Kana iwe uchida imwe rutsigiro kunyorera yeTurkey